India: Tapitra ny 34 Taona Nifehezan’ny Antoko Kaomionista Tao Bengal Andrefana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Mey 2011 6:48 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, বাংলা, Português, 繁體中文, 简体中文, Italiano, Español, English
Androany, Zoma 13 May 2011, no hita nitsoka ny rivo-panovàna ny tontolo politika nanerana ny faritra Bengal Andrefama, fanjakana fahaefatra isan'ny maresaka indrindra ao India. Mamata Banerjee, mpitarika ny All India Trinamool Congress Party (TMC), dia nanaporofo tamin'ireo rehetra tsy nanam-pitokisana ka niakatra teo amin'ny fitondràna, namàrana ny 34 taona naninjitra nitondran'ny Antoko Kaomionista ny fanjakana. Nahazo seza 186 tamin'ireo 274 ao amin'ny antenimiera, nandritra ny fifidianana nisy teo ny antokony, ary miaraka amin'ireo antoko mifanome tànana aminy, dia mihazona seza 227, mariky ny fandresena farany sy miezinezina.
Ambonin'ireo rehetra ireo, very seza ny Lehiben'ny Governemanta Buddhadeb Bhattacharjee, resin'ilay mpirotsaka avy amin'ny TMC tamin'ny isambato 16.000 mahery ary nametra-pialàna taoriana kely, nanaiky ny “fitsaran'ny vahoaka”. Taorian'ny 13 taona niandrasana, an-dàlan'ny haha vehivavy voalohany hitondra ny governemanta azy ao Bengal Andrefana i Mamata Banerjee.
Mariky ny fandresena asandratry ny mpiasa iray avy amin'ny antoko Trinamool Congress taorian'ny voka-pifidianana izay ho ao amin'ny antenimiera ao Bengal Andrefana 2011. Sary avy amin'i Arindam Dey. Copyright Demotix (13/5/2011)
Nandritra ny tontolo andro, toy ireny andro fialantsasatra ireny ny eran'ny tanàna. Tsy nisy olona ny làlana satria nipetraka nanoloana ny vata fahitalaviny ny olona, nanaraka ny fivoaran'ny fanisàna vatom-pifidianana sy ny fandalinana izany isa-minitra. Naresaky ny fientanentanana ny fanjakana iray manontolo – “Ho izy ve? Tsy ho izy?”.
Nony tolakandro, nazava ny vokatra. voailika ny antoko kaomionista, tsy hoe tao Bengal Andrefana fotsiny, fa hatrany Kerala – iray amin'ireo toerana nanjakan-dry zareo.
FIOVANA- Safidim-bahoaka. Sary an'ny mpanoratra.
Naresaka koa ny mpiondana aterineto tamin'ireo vaovao ho raketin'ny tantara. Nirarak'ompana avy etsy sy eroa ny bitsika – ny sasany fiarahabana ary ny hafa fanantenana ny fanovàna mba hitondra zavatra miabo sy fitantanana tsara. Ny sasany koa maneho ny ahiahy mikasika io fanovàna io.
@swatigs: Fandresena ara-tantara ho an'ny TMC ao Bengal ho an'ny taranaka tsy nahita afa-tsy fifehezan'antoko tokana – antenaintsika fa ny ‘poriborton’ (fanovàna) dia hivadika ho fandrosoana.
@IndiaIn: Napatitak'i Mamata ny tilikambo mena, vonona ny ho vehivavy PM voalohany aty B-A: vonona ny handray ny fitantanana an'i Bengal Andrefana amin'ny maha vehivavy voalohany lehiben'ny governemanta azy.
@subroto_kar: Arahaba ry Mamata sy ny TMC. Tamim-panantenana dia nifidy anareo ny vahoakan'i Bengal Andrefana, aza atao vato natsindry ahàzana izy ireo.
FirozeHoque: Arahaba ianao ry Mamata Banarjee. Naniry fiovàna izahay, nomenao, tia anao Didibhai.#TMC #bengal
@rravishankar7: Nomontsanin'i Mamata ny Ankavia taorian'ny efa ho telopolo taona. India – ilay demaokrasia lehibe indrindra eto an-tany. #democracy, #womenpower
@rameshsays: @thenewshour – Tsara toerana i Mamata amin'ny fametrahana fiovàna ifotony eto amin'ity Fanjakana nifotetaka tamin'ny “vanim-potoanan'ny taolana” nandritra ny fotoana ela ity.
@ghoshsaikat: Ela ny ela ka lasa eo am-pelatanan'ny vondrona Maitso ihany ny tranobe Mena. Saingy ny fanontaniana dia ny hoe Manana ny mpitantana ilaina hanodinana ny Governemantan-Panjakana ve ny TMC ?
@StevenWatson5: Arahaba ho an'i Mamata. Na izany aza, afaka hitantana ny fanjakana toa an'i Benga Andrefana mandra-pahatapitry ny fe-potoana omena azy ve izy sy ny mpikambana miara-dia aminy? Misalasala aho.
@ajaykumaraajtak: Ny fanontaniana goavana ao Bengal Andrefana: hahavita hamaly ny hetahetan'ny vahoaka ve i Mamata? Faritra faran'izay mahantra i Bengal ka malaky tonga ny tsy fahafaliana.
Eny ankianja, mifety sy miravoravo ny avy amin'ny antokon'ny mpiasa TMC sy ireo mpiara-dia amin-dry zareo ary mpanohana azy. Miteny ho azy kosa ny zava-mitranga any amin'ireo biraon'ny Ankavia.
Ny zava-misy eo ivelan'ny birao foiben'ny antoko TMC ary ny an'ny CPI(M) izay voahilika. Sary avy amin'ny mpanoratra.
Rezwan koa dia nandray anjara tamin'ity lahatsoratra ity.